14 Afei bere a na Amrafel di Sinar+ so, na Ariok di Elasar so, na Kedolaoma+ di Elam+ so na Tidal di Goiim+ so no, 2 wɔka boom ko tiaa Sodom+ hene Bera, Gomora+ hene Birsa, Adma+ hene Sinab, Seboiim+ hene Semeber, ne Bela (anaa Soar)+ hene. 3 Eyinom nyinaa behyiae+ wɔ Sidim+ Bon mu, Nkyene Po no ho.+ 4 Wɔsom Kedolaoma mfe dumien, na afe a ɛto so dumiɛnsa no wɔtew atua. 5 Na afe a ɛto so dunan no Kedolaoma ne ahene a wɔka ne ho no kunkum Refaimfo wɔ Asterot-Karnaim,+ Susimfo wɔ Ham, Emimfo+ wɔ Sawe-Kiriataim, 6 ne Horifo+ wɔ wɔn bepɔw Seir+ so, koduu El-Paran+ a ɛwɔ sare so no. 7 Na wɔdan wɔn ani baa En-Mispat a ɛne Kades,+ na wodii Amalekfo+ asase nyinaa ne Amorifo+ a wɔtete Hasason-Tama+ so nkonim. 8 Saa bere yi Sodom hene, Gomora hene, Adma hene, Seboiim hene, ne Bela (anaa Soar) hene ka boom ne wɔn de sii ani wɔ Sidim+ Bon mu. 9 Wɔn a wɔne wɔn koe no ne Elam hene Kedolaoma, Goiim hene Tidal, Sinar hene Amrafel, ne Elasar hene Ariok.+ Ahene baanan yi ne baanum no na ɛkoe. 10 Sidim+ Bon mu no, na amoa pii wɔ hɔ a kootaa+ taataa mu; na Sodom hene ne Gomora hene+ guan kɔhwee mu, na wɔn a wɔaka no guan kɔɔ bepɔw so.+ 11 Na wɔfaa biribiara a ɛwɔ Sodom ne Gomora ne wɔn nnuan nyinaa kɔe.+ 12 Wɔfaa Abram nua ba Lot ne n’agyapade nso kɔe. Saa bere no na ɔte Sodom.+ 13 Ɛnna wɔn a woguanee no mu biako kɔbɔɔ Abram a ɔyɛ Hebrini+ no amanneɛ. Saa bere no na wasi ne ntamadan wɔ Amorini Mamre+ nnua akɛse no mu. Ná Mamre nuanom Eskol ne Aner+ ne Abram ayɛ apam. 14 Enti bere a Abram tee sɛ wɔafa ne nua no dommum no,+ ɔfaa mmarima+ ahasa dunwɔtwe a wɔatete wɔn akodi mu, nkoa a wɔwoo wɔn wɔ ne fie,+ na wotiw wɔn koduu Dan.+ 15 Anadwo no, ɔkyɛɛ ne nkoa no mu,+ na wɔtow hyɛɛ wɔn so dii wɔn so nkonim, na wotiw wɔn araa koduu Hoba a ɛwɔ Damasko atifi. 16 Na ogyee nneɛma+ a wɔfae nyinaa ne mmea ne nnipa a wɔka ho ne ne nua Lot ne n’agyapade nso.+ 17 Afei bere a wadi Kedolaoma ne ahene a wɔka ne ho no so nkonim na ɔresan aba no, Sodom hene kohyiaa no wɔ Sawe Bon a ɛyɛ ɔhene Bon+ no mu. 18 Salem hene+ Melkisedek+ a na ɔyɛ Ɔsorosoroni Nyankopɔn+ no sɔfo no brɛɛ no paanoo ne bobesa.+ 19 Na ohyiraa no kae sɛ: “Ɔsorosoroni Nyankopɔn,+ ɔsoro ne asase Bɔfo no,+ Nhyira Abram; 20 Na nhyira nka Ɔsorosoroni Nyankopɔn+ A ɔde w’atamfo ahyɛ wo nsa no!”+ Na Abram kyɛɛ biribiara mu du maa no biako.+ 21 Ɛno akyi no, Sodom hene ka kyerɛɛ Abram sɛ: “Fa akra no ma me+ na fa nneɛma no.” 22 Ɛnna Abram ka kyerɛɛ Sodom hene sɛ: “Mema me nsa so ka Ɔsorosoroni Yehowa Nyankopɔn, ɔsoro ne asase Bɔfo, no ntam+ 23 sɛ, efi asaawa so kosi mpaboa hama so, meremfa me nsa nka biribiara a ɛyɛ wo de,+ na woanka sɛ, ‘me na memaa Abram nyaa ne ho.’ 24 Mempɛ hwee,+ gye nea mmerante no adi no. Na mmarima a wɔne me kɔe, Aner ne Eskol ne Mamre+ nso, ma wɔmfa wɔn kyɛfa.”+